China Bluetooth Speaker Family ktv NV-8942 mpanamboatra sy mpamatsy | YIWU
Battery 18650 * 1800 mA
fahefana 2 * 10W
Size 29 * 14.8 * 12.5CM
Color volamena, mainty
Function:Mandefasa amin'ny fampiasana interface interface USB, tohizo ny famindrana feo tsy misy tariby Bluetooth fifandraisana, antso an-tanana tsy misy Bluetooth, LINE IN, karatra TF, stick USB, radio FM.
Sariitatra endrika noforonina:Drafitra sariitatra, mahafatifaty, azo ampiasaina amin'ny haingon-trano rehefa tsy ampiasaina, mora entina, mety amin'ny haingo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ravaky ny efitrano fandraisam-bahiny, ravaky ny birao, na fanomezana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fanomezana fialantsasatra, fanomezana natokana ho an'ny orinasa, fanomezana fanomezana namboarina ho an'ny hetsika.
Mifanaraka malalaka: Ny fifandraisana Bluetooth dia afaka manohana ny iPhone, iPad, iPod, Samsung, Kindle, telefaona Android, Takelaka, Fiara ary ect. Amin'ny fety, ivelany sy anaty trano, pisinina, morontsiraka ary toby, hitondra anao traikefa fihainoana mbola tsy nisy toa izany.
10m range:Afaka mampifandray haingana ny findainao smartphone na fitaovana ampiasana Bluetooth ao anatin'ny 10m izy io. Izy io koa dia manohana ny karatra TF hilalao mozika, amin'izay afaka mankafy mozika amin'izany ianao. Raha tsy mampiasa fifandraisana Bluetooth ianao dia azonao atao ny mampiasa tariby 3.5mm AUX hampidirana ireo mpandahateny ary ny lafiny iray hampidirana fitaovana fampifandraisana fanampiny ao amin'ny smartphone, solosaina, MP3, MP4, TV sns.
Mora ampiasaina:Ny bokotra rehetra tsy mihetsika dia mamela anao hankafy mozika / antso tsy misy tanana / fakan-tsary fantsom-pifandraisana lavitra amin'ny alàlan'ny gazety iray. Ny mpandahateny dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana manana alalana Bluetooth, na finday avo lenta rehetra momba an'io.
Function:Fantsona 2.1, fahanginana iray / fomban'ny hira K, Bluetooth TF / USB / LINE, fianakaviana KTV, batterie 18650 * 1800 mA, mpihazona telefaona finday, mpandahateny 4-inch, herinaratra: 2 * 10W, jiro mpandahateny, fanonerana azo ovaina.
Mikrô:Mikrofona roa, io no safidy tsara indrindra an'ny Home ktv, fitsangatsanganana
1 x tariby audio
Teo aloha: Bluetooth Speaker 2.1 Channel NV-8945
Manaraka: Usb Charger 2-Port 2.4A NV-A0086
Headset Miaraka amin'i Mic, Cable Charger an'ny telefaona, Headphones Bluetooth Miaraka amin'i Mic, Earphones tsy misy tariby, Apple Car Charger, Headset maimaim-poana amin'ny tanana,